Fampandrenesana amin'ny fisolokiana izay mampiasa ny loka Google ho toy ny maunu | Androidsis
Fampandrenesana amin'ny fisolokiana izay mampiasa ny loka Google ho toy ny moka
Google | | About us, fiarovana
Fisolokiana vaovao mivezivezy amin'ny Internet mampiasa a loka google sandoka toy ny maunu ho an'ny manaikitra ny mpampiasa. Araka ny notaterin'ny Vondrom-panjakana misahana ny heloka bevava elektronika sy solosaina any Mexico, mpampiasa maro no nampandre ny manam-pahefana ny amin'ny famoahana mailaka diso avy amin'i Google izay ahazoana antoka fa nahazo loka ny mpandray.
Na izany aza, Google tsy mbola nizara loka tato ho ato. Ny mailaka dia milaza fa ny loka dia zarain'ny motera fikarohana amin'ny tsingerintaona nahaterahany (zavatra diso tanteraka, hatramin'ny nanombohan'ny Google niasa tamin'ny volana septambra) ary manamafy fa mpandresy nahazo io loka io ny mpampiasa.
Na izany aza, tsy Google mizara loka izy na manao karazana fitsapana rehetra. Ity hafatra ity dia momba ny fisolokiana phisingsatria ny hafatra dia mangataka amin'ny mpandray mba hifandray amin'ny lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola amin'ny orinasa ary handefa vola mialoha. Miaraka amin'izany, ireo scammers dia mahavita mihazona ny angon-tsika manokana ary mangalatra ny volantsika.
Fantatrao izao, raha mahazo mailaka toy izao ianao, dia aza mamaly na manome data anao manokana, Google Tsy mizara karazana loka akory izy io fa fitaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Fampandrenesana amin'ny fisolokiana izay mampiasa ny loka Google ho toy ny moka
k4x30x dia hoy izy:
Valiny amin'ny k4x30x
Martin Garcia Reyes dia hoy izy:
Nahazo fampandrenesana aho mba ho mpandresy amin'ny ekipa loka fanentanana Google ary ny fifandraisana dia Brianhookson@yeah.net, Tsapako fa hosoka io
Valiny tamin'i Martín García Reyes
Jenny dia hoy izy:
Inona no ataonao raha manome ny angon-drakitrao ianao?
Mamaly an'i jenny
Gise dia hoy izy:
Nomeko ny angon-drakitrao
Valiny ho an'i Gise
Judith dia hoy izy:
Inona no tokony hataoko? Nomeko ny angon-drakitrao
Valiny tamin'i Judith
Nivezivezy tamin'ny Internet aho ary nandefa dokambarotra Google izy ireo izay tokony hamaliako fanontaniana 3 hahazoana loka.
Mangataka fampahalalana toy ny: telefaona sy adiresy izy ireo
Ahoana raha manome azy ireo aho?
Nomeko ny mombamomba ahy ary matahotra mafy aho, tsy manana kaonty any Mexico aho ka mila na manampy ahy azafady.
Inona no tokony hataoko. Azafady mba lazao amiko fa tsy nijanona nitomany izy noho ny ahiahy
Kely aho ary nampianarin'ny reniko tsy hiditra amin'ireo lalao ireo ... tsara vintana aho fa tsy liana tamin'ny xD
Valiny tamin'i Rose
IPhone 8 amin'ny $ 53.000 no namolavola ny hafatra araka ny .. Heveriko fa tsy azo antoka sy mandefa izany. $ 1
Ben dia hoy izy:
Heveriko fa tsy azo ampiharina ... rehefa tsy manao ny fividianana an-tserasera amin'ny karatrao ianao ...
Mamaly an'i ben
ny lahy dia hoy izy:
Ireo izay lavo dia vehivavy daholo, tsy manam-pahamehana !!!!
Valio ny lahy
Salome dia hoy izy:
Inona no ataon'izy ireo rehefa manome angon-drakitra izy ireo ??????
Mamaly an'i salome
Aída Lorena Olmedo dia hoy izy:
Androany 10 septambra 2020, azoko avy amin'ny Google fa nahazo iPhone 11 aho… Ary mampiditra ny mailako hanavotra ny lokako…. Nanome ny mombamomba ahy… inona no mitranga?
Valiny tamin'i Aída Lorena Olmedo
Sarin'ny fivoahan'ny OPPO's Find 9, telefaona ho tonga miaraka amina puce Snadpragon 810 ary RAM 4GB
[Lahatsary] Fomba fampiasana ny kinova an-tranonkala an'ny WhatsApp, ilaina ny fampidirana APK